Xukuumadda Somaliland Oo Hay’addaha Caalamiga Ah Ee Ku Sugan Dalka U Qaybisay Xeer Tilmaamaya Qaabka Ay U Shaqaynayaan Iyo Qaar Ka Mid AH Hay’addaha Oo Ka Walaacsan Xeerkaa | Araweelo News Network (Archive) -
Xukuumadda Somaliland Oo Hay’addaha Caalamiga Ah Ee Ku Sugan Dalka U Qaybisay Xeer Tilmaamaya Qaabka Ay U Shaqaynayaan Iyo Qaar Ka Mid AH Hay’addaha Oo Ka Walaacsan Xeerkaa
Hargeysa(ANN)Wasaaradda Qorshaynta Qaranka ee Somaliland, ayaa u qaybisay hay’adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan sharci xukuumaddu ku maamuli doonto iyo nidaamka wada-shaqayneed u dhexayn doona. Xaflad lagu qabtay shalay huteelka Maansoor ee magaalada
Hargeysa oo ay ka qaybgaleen masuuliyiinta Wasaaradda iyo wakiilo ka socday in ka badan sagaashan hay’addaha Qaramada Midoobay iyo kuwa caalamiga ah ee dalka ka hawlgala, ayaa loogu qaybiyey xeerka hay’adaha samafalka oo hore uu u ansixiyey Golaha Wakiillada Somaliland.
Xeerkan ayaa qeexaya nidaamka ay u wada shaqaynayaan dawladda iyo hay’addaha, isla markaana tilmaamaya awoodaha u bannaan hay’addaha, waxa kale oo uu oggolaanayaa in dawladdu la socoto hannaanka hay’adduhu mashaariicda u soo qaataan iyo weliba sida ay u fulinayaan marka ay doonayaan inay dalka keenaan mashruuc.
Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta Dr. Sacad Cali Shire oo kulankaas ka hadlay, ayaa sheegay in dawladdu si gaar ah ay ula socon doonto maashriicda horumarineed ee ay hay’adaha caalamig ah ka fuliyeen deegaanada Somaliland si loo ogaado nooca mashruuca iyo faa’iidada uu u leeyahay dhulka laga fulinayo, isagoo carrabka ku adkeeyey inay si qoto dheer ula socon doonaan sida loo kharashgaraynayo mashaariicda.
“Ujeeddadu ahayd in hay’adaha loo soo bandhigo xeerkan oo qeexaya siday isku diwaan galinayaan, waxyaalaha ay qabtaan iyo warbixinadooda,” ayuu yidhi Dr. Sacad oo ka hadlayey sababta xafladda loo qabtay.
Wasiirka oo faahfaahinayey qaabka ay dawladda iyo hay’aduhu u wada shaqaynayaan, waxa uu yidhi, “Run ahaantii hay’aduhu inooma keenaan lacag lakiin waxa ay keenaan agab iyo qalab, waxaanay noo soo gudbinayaan ka hor inta aanay mashruuca bilaabin warbixin dhan waxa ay qabanayaan lacagta ama kharashka ku baxayaa inta uu dhan yahay iyo muddada. Marka taas aanu helno ee aanu ka aqbalno waxaanu annagu leenahay ku dabagalka oo kaliya iyaguna hawsha ayey fulinayaan marka ay dhammeeyaana waa inay keenaan xisaab-celin.”
Waxa kale oo Dr. Sacad sheegay in xeerku tilmaan ka bixinayo meelaha hay’aduhu mashaariicda ka raadsan karaan, “Hay’aduhu lacag kama raadin karaan hay’ada fuliyayaasha ah ee waddanka jooga laakiin way u furantahay inay ka raadiyaan Hay’adaha deeq bixiyayaasha ah”
Dr. Sacad waxa uu sheegay in ay dalka ku sugan yihiin hay’addo tiro badan, kuwaas oo intii hore uga shaqaynaysay ahayd 90 Hay’addood iyo weliba 80 cusub oo kale.
Hay’addaha caalamiga ah ee ku sugan Somaliland ayaa qaarkood walaac ka muujiyeen xeerkaa, iyagoo ku ku tilmamay inuu yahay mid dabraya hawlahooda shaqo oo aanay u madaxbannaanaanayn. Sidaa awgeed loo baahanyahay in wax laga bedelo xeerkaa ka hor inta aan la meel marin.